Khasaara Gaalada AMISOM kasoo gaaray Qaraxyo Barakaysan oo ay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin kula beegsatay degmada X/Jajab ee magaalada Muqdisho | Halganka Online
Khasaara Gaalada AMISOM kasoo gaaray Qaraxyo Barakaysan oo ay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin kula beegsatay degmada X/Jajab ee magaalada Muqdisho
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qaraxyo barakaysan oo maanta magaalada Muqdisho lagula eegtay cutubyo katirsan Ciidamada Gaalada AMISOM ee xoogga ku joogo magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa mid Barakaysan ayaa sababay dhimashada 5 Askari oo Yugaandhiis ah iyo dhaawac soo gaaray 8 kale oo katirsanaa Saliibiyiinta maanta lalaayay.
Guutada qaraxyada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa gaalada Miino u dhigtay xaafadda Sheelare degmaa X/Jajab ee magaalada Muqdisho, saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Idaacadda Andalus u xaqiijiyay in ay cadawga ka dileen 5 Askari oo ay Bakhtigooda ka daad guraysteen goobta.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Ciidamada Gaalada AMISOM ay muddo ku dhaw 30 daqiiqo ah ay u xireed wadada si ay u daad guraystaan Bakhtiga ciidanka uga halaagsamay Howlgalkaasi.
Guutada Qaraxyada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo ku bartilmaameedsanayay cadawga Saliibiga ah ee ku sugan qaybo katirsan magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka X/Jajab ayaa sheegay in Ciidanka Cadawga ah ay rasaas ku fureen shacab rayid ah waxaana halkaasi ku shahaadda qaatay qof haweenay ah oo aan waxba galabsan.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa bishii lasoo dhaafay Camaliyad Istish-haadi ah la beegsatay Saliibiyiinya Yugaandhiiska ee fariisinka ka dhigtay Bankigii hore ee gaancsiga degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho.
« Ciidamada Xisbada Wilaayada Islaamiga Banaadir oo Toogtay Nin Burcad ah oo dhibaaton ku hayay shacabka xaafadda Juungal degmada Yaaqshiid. Boqolaal katirsan Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo Galabta dhoolatusyo kusoo bandhigay bartamaha magaalada Kismaayo iyo Sheekh Cali Dheere oo sheegay in Ciidankaasi ay Xad beenaadka Kenya u dhaqaaqi doonaan. »